Maitiro ekuteedzera exFAT disks kushanda muWindows uye OS X | Ndinobva mac
Uchishandisa yekunze dhiraivha paMac uye Windows inogona kuve chaiyo musoro. Iyo hurukuro pakati pekuteedzera yekunze dhiraivha muNTFS kana HFS + yakagara yapera. Iwe haufanire kusarudza pakati peimwe kana imwe, nekuti fomati nyowani yakaonekwa, exFAT inoenderana neWindows uye OS X, uye haina iyo 4GB pamafaira mashoma eFAT32. Asi kushamisika ndekwekuti kumisikidza dhisiki mune iyo fomati kubva kuMac nyowani hakuzoshanda muWindows, uye ichashanda kana tikazviita neimwe nzira yakatenderedza.. Dambudziko pasina mhinduro? Kwete zvakanyanya kushoma. Nekutevera iri gwaro, unogona kuomesa madhiraivha ako seFAT paMac yako woashandisa paWindows pasina dambudziko.
1 GUID mepu yekuparadzanisa ndiyo honzeri
2 Kugadzirisa sarudzo dzepamberi muEl Capitan
GUID mepu yekuparadzanisa ndiyo honzeri
Kana isu tichaumba dhisiki kubva kuOS X Disk Utility isu tichagara tichizviita tichishandisa GUID Chikamu Mapu. Hapana chikonzero chekutsanangura kuti chii ichocho, ingo taura kuti hazvishande saizvozvo muWindows. Neichi chikonzero, kunyangwe exFAT iri fomati inoenderana neWindows, kana uchishandisa iyi mepu yekuparadzanisa diski haishande kwatiri mune yeMicrosoft system. Tinozvigadzirisa sei? Kugadzira iyo diski ine MBR Chikamu Chikamu.
Mashandisiro ekushandisa iyo yemagetsi DNI kana DNIe pane Mac
Dambudziko nderekuti El Capitan haatitenderi isu kusarudza iyo sarudzo. Kana tikashandisa Yosemite kana imwe sisitimu yapfuura, tinogona kusarudza kuti ndeipi Chikamu cheMepu chatinoda kushandisa sarudzo dzepamberi, asi muEl Capitan sarudzo iyoyo haioneke kwese kwese. Nekurerutsa ichi chishandiso, Apple yakavanza izvo zvemberi sarudzo, asi usazvidya moyo, nekuti zvakavanzika chete, saka tinogona kuzviita kuti zvionekwe.
Maitiro ekuisa macOS Mojave pane "isingatsigirwe" Mac
Kugadzirisa sarudzo dzepamberi muEl Capitan
Kuti uratidze zvakasarudzika sarudzo dzeDisk Utility kunyorera iwe unofanirwa ku:
Nyatsovhara iyo "Disk Utility" application
Vhura iyo "Terminal" application (mukati meApplication> Zvishandiso) uye unama unotevera mutsara:
zvisizvo nyora com.apple.DiskUtility yepamusoro-mufananidzo-sarudzo 1
Iye zvino unogona kuvhura iyo "Disk Utility" kunyorera zvakare uye sarudza rekunze dhisiki iro iwe raunoda kumisikidza Zvino enda ku "Delete" (kwete Chikamu) uye sarudza sarudzo "Master Boot Record (MBR)". Pakupera kwemafomati, disk rako rinoshanda zvakakwana pane chero komputa ine OS X neWindows.
Kana usina chokwadi nazvo exFAT fomati, enda kune iyi link yatichangobva kukusiya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuteedzera exFAT disks kushanda muWindows uye OS X
Super inobatsira, ndichazviita paMac yangu
Izvo hazvishande kwandiri, ndinoramba ndichiwana imwechete 3 sarudzo sarudzo. Ndine Os x Capitan.
Mhoro, chipa imwe mhando yemafomati uye iwe uchaona iyo sarudzo gare gare.
Inosimudzira Garcia Mgm akadaro
Tarisa Andrés Anzo
Pindura kuna Moises Garcia Mgm
Irvin canche akadaro
Ini ndaida iyi info, ndatenda xD
Pindura Irvin Canche
Ini ndakabvisa SD yangu fomati ne exFAT ine OS Capitan ndisingazive izvi uye kana ndichiongorora inoita kunge MBR, ini ndaisazvida izvi kunyangwe vamwe vangazvida.
Ropa jena reropa akadaro
Mhoro! Aya madhisiki akamisikidzwa muexFat Iwo anoenderana neTV kana iwe uchiasanganisa iwo kuburikidza neusb?
Mhoro, kana ichienderana neterevhizheni. Chaizvoizvo ese anotsigira exFAT, NTFS uye FAT32 fomati
Ndakambozviedza imwe nguva uye ndinofunga hazvipindirane nekuona mavhidhiyo paTV ... asi ini ndaida kubvunza kana vachishandira kugadzira Time Machine makopi?
Kune iyo TimeMachine zvirinani kuti iwe usarudze otomatiki sarudzo yeiyo system iyo yainoburitsa. Uye hongu, zvinoenderana neterevhizheni.
waita hako !!
Ndatenda zvikuru, mune imwe dzidziso vakangotaura zvinopesana. Makandiponesa. Ndinotenda zvikuru.
Kutenda kuzhinji.!!!! hauna zano kuti zvakandibatsira zvakadii !!!
Mangwanani akanaka Luis,
Kunyangwe uchitaipa rairo mune terminal, iyo mbr sarudzo haioneke. Ini ndatsvaga internet ndikabvunza Apple ndisina mhinduro yakanaka. Ndakawana iyi blog pandakanga ndichitsvaga mhinduro nekuti handifunge kuti vanondipa kuParrot. Kukumbira mumwe munhu aine Windows kuti uwane nyasha haisi sarudzo !! Iye iye
Mhoro. Pandinosarudza Delete / ExFAT / Master Boot Record (MBR) ndinowana kukanganisa: "Ndakundikana kudzima" Nei izvi? Zvandinogona kuita? Ndatenda
Ndokumbirawo ushandise imwe fomati pamberi wozoedzazve.
Mireia Zvakanaka Maya akadaro
Inonyanya kubatsira! Kutenda kwazvo! Ini ndanga ndichipenga nazvo…! Thanks ndatenda !!
Pindura Mireia Pozo Maya
Mhoro. Pandinosarudza Delete / ExFAT / Master Boot Record (MBR) zvinondipa kukanganisa: "Ndakundikana kudzima" Nei izvi? Zvandinogona kuita? Ndatenda
Fomati mune imwe fomati uye mushure mekuda kushandisa iyo sarudzo iwe uchakwanisa kuiona.
Ndatenda kwazvo, makandiponesa.
Samsung SSD 850 EVO yakaumbwa muEexFAT uye MBR bhuti. Ngatione kuti zvinoshanda sei.
Kupokana uye kupembedza kushayikwa kwehunyanzvi, ndine 2 TB yekunze DD uye OS X El Capitan uye sarudzo yeMBR inoonekwa, asi mu "Fomati" munda, ndinofanira kutarisa ExFat kuitira kuti mafaera averenge / anyorwe ese Windows senge Mac ??, iyi ndiyo sarudzo yakanakisa ??. Kutenda kwazvo
Ini ndakaronga ExFat kubva kuEl Capitan, ndichichengeta iyo GUID partition system (nekuti yaive 3TB hard disk uye iyo MBR, sezviri pachena, haitsigire inopfuura 2TB), uye kuyedza iyo paWindows 10 64bit, inoita kunge inoshanda .. Ini ndobva ndafunga kuti dambudziko iri rekusawirirana iro nyaya inotaura nezvayo ratogadziriswa muWindows itsva?
Mhoroi, ndine dambudziko rakafanana asi neSierra, ndinofanirwa kumisikidza USB ine MBR kuti iite partition nekuisa windows, asi muDisk Utilities haina kundipa sarudzo, uye kunyora muTerminal mhinduro yatakatipa kwete kundishandira, ndinofunga izvozvo kuve Sierra.
Iwe ungazive here kuzviita kune ino nyowani yekushandisa system? Ndatenda zvikuru pamberi.
Mhoro! Ndine 3TB hard drive uye handigone kuimisa pane ExFat32 system ine Master Boot Record (MBR). Kana iwe uchindisiya ne GUID Chikamu cheMepu.
Pane nzira yekuzviita here?
Iwo wekuraira sekusungirirwa kwedzidziso hauna kundishandira.
Kuchinja "zvisizvo nyora com.apple.DiskUtility yemhando-yemifananidzo-sarudzo 1" kuita "zvisizvo nyora com.apple.DiskUtility advanced-image-options 2" zvinondipa izvo zvamataura.
Ini ndinonzwisisa kuti ndeye TYPO.
Ini ndoda kukuvandudza iwe kuti kusvika parinhasi nyaya yemafomati yagadziriswa, ... unogona fomati yako USB muEFFAT uye ne MAP e GUID zvikamu. Uye ichakushandira iwe pane chero Inoshanda Sisitimu iwe unogona kutowedzera faira rakakura kupfuura 4 GB.
Kune ino hwctor chirevo, zvinoreva here kuti ini ndinogona fomati WD Elements muExpF ne MAP ye GUID zvikamu muMac uye ini ndinogona zvakare kuishandisa muPC pane ese mashandiro (Wedzera, bvisa, bvisa, dhawunirodha mafaira pane mac uye pc) ? - Ndichine sarudzo mbiri: «Master Boot Record» uye «GUID». Dzose dzakafanana here? Ndatenda
WWDC 2016 zuva, nyowani 12 "MacBooks, nyowani beta OS X El Capitan uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki paSoydeMac